तपाइँको लागी Jinfuya सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य मा स्वागत छ
२१-०3-०8 मा व्यवस्थापक द्वारा
जिनफुया प्रसाधन सामग्री एन्जिल्सको शहरमा गर्वका साथ स्थापित र हुर्किएको छ। यो एक अभिनव र विकसित सुन्दरता ब्रान्ड हो जुन तपाईंलाई उत्तम पशु-मुक्त सौंदर्य प्रसाधनहरू प्रदान गर्न सक्दछ। हामी किफायती र समावेशीकरणको बारेमा ख्याल राख्छौं, र हाम्रो सौन्दर्य प्रेमीहरूको समुदायलाई अँगालो लिन र मेकअप प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। हामी ...
आँखा छाया एक कस्मेटिक हो जुन पलकमा र भौं अन्तर्गत लागू हुन्छ। यो सामान्यतया पहिरनेको आँखा बाहिर उभिन वा अधिक आकर्षक देखिन्छ। आँखाको छायाले कसैको आखामा गहिराइ र आयाम थप्छ, आँखाको रंगलाई पूरक बनाउँछ, वा आँखामा ध्यान आकर्षित गर्दछ। आई एस ...
कसरी सबै भन्दा राम्रो जग तरल छनौट गर्न?
हाम्रो सब भन्दा बेच्ने तरल फाउण्डेशन अब shad० शेडमा! लाइटवेट, तेल-रहित फार्मुलाले एक सुन्दर सेमी-म्याट फिनिशको लागि प्राकृतिक रूपमा छालामा मिश्रण गर्दछ जुन दिनभर रहन्छ। तरल सूत्रले उज्ज्वल छालाको लागि असमान छाला बनावट र टोनहरू पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। सबै छाला प्रकार र t को लागि उत्तम ...
एक मेकअप प्रगति कसरी समाप्त गर्ने
मेकअप को मामला मा, आफ्नो अनुहार acing व्यवसाय को पहिलो आदेश हुनु पर्छ आफ्नो ओठ मेकअप र आँखा मेकअप मा अघि बढ्नु अघि। तर चीजहरू जटिल हुन सक्छन्। के तपाईंलाई वास्तवमै प्राइमर चाहिन्छ? के कन्सीलर फाउन्डेशन अघि वा पछि आउँछ? हामी यहाँ छौं हाम्रो एसको साथ समीकरण बाहिर अनुमान गर्न ...